Ahoana ny fananganana mpanonta printy laser amin'ny linux | Avy amin'ny Linux
Ny ankamaroan'ny fizarana GNU / Linux ankehitriny dia manana fanohanana lehibe ho an'ny fitaovana maoderina indrindra, na izany aza, mbola misy ihany ny mpanamboatra fitaovana manakana amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa fa ny rafitra fiasa malalantsika dia afaka mifanaraka amin'ny vahaolana. Soa ihany ho an'ny maro, tsy izany no tranga ho antsika izay mampiasa mpanonta marika Brother satria manana mpamily teratany ho an'ny Linux izy ireo.
Manana ny Fanontana laser an'ny Rahalahy DCP-L2550DNTsy hoe mpanonta printy mahafinaritra izy io fa raha mamela ahy hanonta haingana, miaraka amin'ny kalitao tsara sy mahafeno ny antenaina amin'ny vidiny, dia mora ihany koa ny mahazo cartridges an'ny Rahalahy TN2410 sy TN2420 mora vidy, ireo no ampiasain'ity fitaovana ity. Amin'ny Linux Mint dia miasa tsara be ho ahy izy io, na dia nanana nify mamy aza aho dia nijaly bebe kokoa noho ny mahazatra mba hampandeha azy, noho izany dia tsara ny manazava ny fomba tokony hataon'ireo mpampiasa manana fitaovana mitovy amin'izany.
Ny zavatra voalohany tokony hataon'ireo mpampiasa manana mpanonta ity marika ity dia ny mankany amin'ny pejy mpamily rahalahin'i linux ary ampidino ny mpamily ho an'ny maodely mpanonta manokana, aparitak'ireo karazana fitaovana nozarain'ny orinasa (CUPS, LPR, Scanner, ADS, mpanonta laser, sns). Ny sokajy mpamily tsirairay avy dia manome vahaolana ho an'ireo vokatra mifandraika amin'izany, ka izany no antony, ohatra, ny mpamily iray ihany dia afaka miasa amin'ny mpanonta printy Brother DCP-L2510D, Brother HL-L2310D ary Brother MFC-L2710DN.
Ny anadahy dia manolotra antsika amin'ny pejin'ny fametrahana mpamily boky iray manokana hampiasana azy arakaraka ny fizarana ananantsika, ny maodelin'ny fitaovana sy ny maritrano misy azy, amin'ny fomba mitovy, manome antsika ny fahafahana manamarina ny fiasan'ny mpanonta, ny fanaingoana ny karazan-taratasy na koa ny satan'ireo cartridges-nao.
Ny dingana amin'ny ankapobeny dia tsotra, mankany amin'ny pejin'ny mpamily Rahalahy izahay, misintona ny mpamily mifanentana amin'ny fitaovanay sy ny distro ary mametraka ireo fonosana fototra miaraka amin'ity baiko manaraka ity:
Avy eo dia averinay indray ny solosainay, ary apetrakay ireo mpamily satria tsy asehon'ny pejy fanohanan'ny Rahalahy, amin'ny tranga sasany dia tsy maintsy mandeha any amin'ny faritra Systems / Administration / Printers (araka izay mety amin'ny distro anao) izahay ary misafidy ny mpanonta izay vao napetrakao, Amin'izany no ahafahantsika mampiasa ny mpanonta anay amin'ny fomba natoraly.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Ahoana ny fomba hananganana mpanonta printy laser amin'ny linux
Mampiasa anadahy dcp 7065dn ao manjaro gnome aho ary ao AUR ireo mpamily.
Ireo mpanonta ireo mazàna dia manana mpamily ao amin'ny rpm ary ny debog ho an'ny archlinux sy ny derivatives dia matetika ao AUR ary ho an'ny gentoo dia misy rahalahy misarona.
DAC dia hoy izy:
Rindrambaiko maimaimpoana ve ireo mpamily - loharano misokatra?
Valiny amin'ny DAC
Amin'ity tranga ity dia mpamily ho an'ny Linux izy ireo, saingy tsy misy ny loharano (tsy loharano misokatra izy ireo), indrisy
Raha ny zavatra lazain'izy ireo, farafaharatsiny manana fanohanana bebe kokoa noho ny an'i Ricoh ny Rahalahy. Manana Ricoh multifunction SP310spnw aho izay tena tsara, saingy rehefa hampiasa azy amin'ny Linux dia manome aretin'andoha be dia be, ary ny ampahany amin'ny fanontana ihany no azo ampiasaina. Ny fanohanana an'i Ricoh dia tsy misy, ary na dia toa manana mpamily ho an'ny Linux aza izy io, rehefa manandrana mametraka azy ireo dia manome hadisoana, satria ... CUPS dia mandeha !!! Efa ho herintaona no nahazoako an'io ary na dia nandefa mailaka avy hatrany tany amin'i Ricoh aza aho nangataka azy ireo hitady fomba hamoronana mpamily sahaza azy, hatramin'izao dia mbola tsy nanaiky akory ny fahazoana ilay mailaka izy ireo. Tsy maintsy mampiasa OS hafa aho vao afaka scan.
Mampiasa wifi laser Rahalahy laser HL-2135W tena lafo aho ary nahafinaritra tamin'ny Linux nandritra ny taona maro. Faly be.
Puigdemont 64bits dia hoy izy:
Ny 1210w dia napetraka amin'ny alàlan'ny pkgbuild efa antitra ary manova azy, tsy hita nalaina teny vitsivitsy izy, saingy mety tsara.
Mamaly an'i Puigdemont 64bits
Aza mividy Rahalahy, mividy HP, dia hazavaiko ny antony: Eny, manana mpamily ho an'ny GNU / Linux izy ireo, saingy manan-katao izy ireo. Raha aorian'ny taona X dia ajanony ny fanavaozana ny mpamily ho an'ny voa vaovao ary tsy miasa intsony izy ireo, avelany handry ianao ary tsy hisy olona afaka manova ny kaody satria tsy ananantsika izany. Ampiasao ny Rahalahy DCP7065dn.
Mitandrema ihany koa amin'ny HP satria misy mpanonta koa tsy misy mpamily maimaimpoana, toy ny HP LaserJet Pro CP1025nw. Vidio ireo manana mpamily maimaim-poana hisorohana ny fanodikodinam-bola amin'ny ho avy hividianana mpanonta vaovao na fahazoan-dàlana Windows na Mac OS vaovao (izay manana mpamily hatrany).
Aza mividy na manao ahoana na manao ahoana printer an'ny SHARP, manana ny copier / printer an'ny MX 2310U izahay: ny mpametraka mpamily azy voalohany ho an'ny linux (http://www.sharp.es/cps/rde/xchg/es/hs.xsl/-/html/centro-de-descargas.htm?p=&q=MX-2310U&lang=ES&cat=0&type=1214&type=1215&os=&emu=) dia manana hadisoana fanovana anarana maromaro izay manery antsika hikasika ilay script mba hampandeha azy tsara, faharoa dia ananantsika ao anaty tambajotra voalamina miaraka amina kaody ho an'ny mpiasa tsirairay ary hita fa tsy manana toerana hametrahana ilay kaody ilay mpamily Linux amin'ny Windows eny amin'ny fitantanana asa - Fanamarinana ny mpampiasa - mpampiasa). Ka tsy afaka mampiasa azy amin'ny GNU / Linux aho, ary nanandrana fika tahaka ny fanovana ny rakitra PPD (https://linuxsagas.digitaleagle.net/2014/12/05/setting-up-a-sharp-mx-2600n-printer-on-ubuntu/) ary andramo mihitsy aza ny mpamily izay mampiasa injeniera mihodina ho an'ny encryption (https://github.com/benzea/cups-sharp).
Filaharan'ny safidinao: HP misy mpamily maimaimpoana, HP misy mpamily manana anao, Rahalahy manana mpamily tompony, tsy midika izany fa Sharp.
Mitaky mimari-droa izy ireo hiasa, ohatra ny an'ny dcp 7065dn rahalahiko izay ampiasako ampahan'ny mpamily raha toa ka rindrambaiko maimaim-poana izany fa mila binary binary izay tsy maimaim-poana.
Aza mividy mpanonta raha tsy misy mpamily maimaimpoana, na ho eo am-pelatanan'ny orinasa mpamokatra izany fa raha tsy manavao ny mpamily azy miaraka amin'ny rafitry ny rafitra ampiasainao izy dia hanery anao hividy rafitra hafa na mpanonta hafa.
Ny HP misy mpamily maimaim-poana dia tsara kokoa, tandremo fa misy HP manana mpamily tompona toa ny HP LaserJet CP 1025nw, ao amin'ny Brother dia manana mpamily tompony avokoa izy ireo fa farafaharatsiny misy izany. Ny ratsy indrindra dia ireo mpanonta coparaires SHARP izay tsy manana safidy toa azy ny mpamily ny GNU / Linux toa ny fametrahana ny kaody voatendry hanonta anao amin'ny tamba-jotra, izay manakana ny fampiasan'izy ireo amin'ny Linux raha te hofehezina ny kopian'ny tsirairay. ohatra ny Sharp MX 2310U izay tsy vitako akory ny nanamboatra ilay mpanonta tamin'ny alàlan'ny fanovana ny PPD (https://linuxsagas.digitaleagle.net/2014/12/05/setting-up-a-sharp-mx-2600n-printer-on-ubuntu/) na miaraka amina mpamily maotera (https://github.com/benzea/cups-sharp).
Koopa dia hoy izy:
Salama. (Andro, alina, sns.) Misy olona afaka mitari-dàlana ahy amin'ny fametrahana sy fananganana scanner an'ireo mpanonta printy ireo? na lazao amiko hoe aiza no ahitako vaovao efa levona. Any am-piasana aho dia maodely maro be an'ny Rahalahy multifunction no ampiasaina ary ny fikirakirana ny mpanonta printy raha vao apetraka ny mpamily dia tsotra, nefa indraindray ny rafitra (amin'ny ankapobeny zorin os 9 lite) dia mamantatra scanner vitsivitsy amin'ny tambajotra indraindray, fa indraindray kosa tsy. Tiako raha misy miteny amiko ny fomba anampiana an'ity scanner ity amin'ny tanana (ahoana no ilazana azy hahafantatra ilay scanner multifunction miaraka amina IP iray). Notadiaviko ary ny tena zava-bita dia ny anarana scanner miaraka amin'ny IP hita ao anaty lisitra fitadiavana tsotra nefa tsy misy zavatra notsikonina. Toy izany koa no mitranga amiko amin'ny multifunction samsung, fa ireo dia toa miseho matetika ao amin'ny lisitra simplescan kokoa noho ireo rahalahiny. Mitranga amiko fa misy PC mahita ny scanner ary ilay eo akaikiny tsy mahita; dia hoe ao anaty tambajotra iray ihany izy ireo.
Valiny amin'i Koopa
Fanontaniana iray, adaladala izany satria efa hitako fa tsara, hanontaniako izy, fantatrao ve raha Lexmark mpanonta (Z11 LPT sy X75 rehetra-in-iray) mandeha tsara amin'ny Linux? avy amin'ny zavatra notadiaviko dia tsy misy na inona na inona mihitsy, ao amin'ny Ubuntu 9.10 niasa ny Z11, nametraka kernel taloha ve hahomby?
PS: afaka manompa izy ireo, mendrika izany aho 😉
Andramo izao: apetaho amin'ny virtualbox ny Ubuntu 9.10 ary manandrama manonta avy ao amin'ny mpanonta anao. Raha nahomby izany dia azonao atao ny manandrana mizara amin'ny tamba-jotra amin'ilay linux mankany amin'ny linux anao hanonta avy aminao na hanonta miaraka aminao ao amin'ny pdf ary hametraka ny pdfs hanonta ao anaty folder zaraina eo amin'ireo rafitra roa hahafahana maka izany avy amin'ny Ubuntu 9.10.
Izany no olana amin'ireo mpamily fananana, mitovy ny mitranga ao amin'ny Windows, nividy zavatra ianao 15 taona lasa tamin'ny Windows XP ary tsy misy mpamily ho an'ny win7 na 10.
Aza mividy na inona na inona amin'ny mpamily tompony raha misy zavatra amin'ny fifaninanana amin'ny mpamily maimaim-poana, safidio tsara.
Misaotra noho ny fampahalalana, tiako raha afaka mampianatra momba ny fampifandraisana ny mpanonta an-tserasera amin'ny alàlan'ny wifi ianao any aoriana ... raha ny amiko dia ny MFC9330CDW izany. Misaotra mialoha
Manana Rahalahy HL-L2340DW aho ary mifandray aminy amin'ny alàlan'ny Wifi. Raha mampifandray ny mpanonta amin'ny alàlan'ny USB dia tsy nisy olana, saingy tsy afaka niasa tamin'ny alàlan'ny Wifi.
Manolotra anao i Brother, farafaharatsiny ho an'ny Ubuntu, zavatra antsoina hoe Driver Install Tool, izay mihevitra fa ny mpampiasa irery (na saika, zavatra tsy maintsy atao) ny mpamily ilaina. Ny olana dia tsy maintsy fantatrao ny fanaovana azy. Raha ny amiko, rehefa avy nitety ny Google kely aho dia hitako fa manazava izany aminao eto ny Rahalahy:
Ny olana dia ny fahalalana ny afobe apetraka ao amin'ny URI ... Ka noho izany, nitohy tamin'ny fikarohana aho nahita ny valiny tamin'ny fanehoan-kevitra iray avy amin'i jose1080i ato amin'ity lahatsoratra ity:
Tsy azo hazavaina tsara kokoa.
Wifism dia hoy izy:
Tsy mandeha amin'ny maodely Rahalahy rehetra io, marina? Manana laser mainty sy fotsy aho ary tsy misy lalana
Mamaly ny Wifism
Enrique Gallegos dia hoy izy:
Mampiasà Linux Mint 19 Cinnamon 64 bits aho, nividy ny mpanonta laser monochrome Brother HL-1110 aho ary rehefa avy nanafana ny foko (mandeha amin'ny alàlan'ny USB) fa tsy Wifi, miseho amin'ny fitantanan-draharaha ary mamindra ireo antontan-taratasy mihitsy aza izy ireo nefa nivoaka banga, satria inona no tsy maintsy ananako «windols» hanaovana pirinty, izay mandeha tsara.
Valiny tamin'i Enrique Gallegos